Daawo Video “Dagaalkii kululaa ee ka Dhacay Buulo-Mareer Iyo Xabada Oo Dhacayso | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Daawo Video “Dagaalkii kululaa ee ka Dhacay Buulo-Mareer Iyo Xabada Oo Dhacayso
Saraakiisha Ciidamada Dowlada Federaalka Somalia iyo kuwa AMISOM ayaa ku goodiyay in Kooxda Alshabaab ay sifeyn doonaan maalmaha soo socda gabi ahaan Deegaanada fara ku tiriska ah oo ay kaga harsan yihiin G/Sh/Hoose.
Taliyaha Hoggaaminaaya Ciidamada AMISOM, ayaa sheegay in qorshaha ugu weyn ay tiigsanayaan uu yahay sidoo Kooxda Alshabaab ay uga sifeyn lahaayen Gobolka, waxa uuna Farta ku goday in Ujeedkooda ugu weyn uu yahay sidii ay mar un gacanta usoo galin lahaayen Degmada xeebta ku taal ee Baraawe oo u jirta Buulo Mareer ilaa 80-KM.
Saraakiisha labada garab ayaa aaminsan in Degmada xiligaani aysan ku sugneyn dad sidaa usii badan, islamarkaana ay suuragal tahay inay si sahlan ay halkaasi Kooxda Uga saaraan.
C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose iyo Taliyaha Ciidamada AMISOM ee Labada Shabelle iyo Banaadir Dick Olum ayaa dadweynaha kula hadlay meel fagaare ah oo ku taal bartamaha Buulo Mareer.
Guddoomiyaha iyo Taliyayaasha ayaa waxa ay shacabka ku nool bartamaha Buulo Mareer, ka codsaday inay ka caawiyaan dhanka Ammaanka islamarkaana kusoo wargaliyaan wax waliba oo garaafeyn kara Ammaanka iyo jiritaanka Qaranka.
Dhanka kale, Shacabka deegaanka ayaa ka dalbaday saraakiisha iyo mas’uuliyiinta inay amniga ka shaqeeyaan, ayna dhicin falal boob iyo bililaqo oo ay geystaan ciidamada, waxaana Arrintaasi si wanaagsan usoo dhaweeyay Guddoomiyaha iyo Taliyayaasha Ciidamadda labada garab.